Duties and Responsibilities of ASEAN & Regional Cooperation Department
Duties and Responsibilities of ASEAN & Regional Cooperation Department	HomeAbout MyanmarGEOGRAPHYCLIMATEPOPULATIONRELIGIONLANGUAGECULTUREHISTORICAL BACKGROUNDAbout UsMYANMAR HOTEL AND TOURISM LAWDuties and Responsibilities of the DepartmentsBilateral Tourism AgreementsTourism Investment EnvironmentGuide to Investment and Doing BusinessBusiness EnvironmentBusiness OrganizationDirectives for Coastal Beach AreasAdministration and Finance Department (DHT)Hotels and Tourism Supervising DepartmentInternational & Regional Cooperation Department (DHT)Latest NewsDestinationFestivalsDestinationIntroducing MyanmarGOLDEN SMILESNATIONALITIESGOLDEN SIGHTSGOLDEN ARTSGOLDEN OPPORTUNITIESPUTAOEco-TourismKakaborazi ParkMyaing Hay WunIndawgyi Lake SanctuaryNat Ma Taung National ParkMeinmahla KyunZoological GardensAlungdaw Kathapa National ParkHlawaga ParkPopa Mountain ParkShwesettaw SanctuaryInlay LakeSein-Ye Forest CampChatthin SanctuaryBotanical GardensMoneyingyi WetlandTourist InformationDOs & DON'TsPERMITTED AREASUseful LinkHelpful NumbersEmbassyMyanmar Embassies AbroadForeign Embassies in MyanmarE-VisaTourism PoliceSERVICESHOTELS & RESORTSTOUR COMPANIESTOUR GUIDECRUISES & YACHTS COMPANIESCarTourist TransportFlight SchedulesAirlines in MyanmarLinks of the airline websitesDomestic Train SchedulePUBLICATIONHANDBOOKSVisitors' GuideTOURISM STATISTICSASEAN Tourism StandardsArticles (Englsih)Articles (Myanmar)Tourism BrochureVideosASEAN TOURISMVisit Asean@50IndonesiaPhilippinesSingaporeThailand
Public Relation & Information Department	Print Email Duties and Responsibilities
1. Providing travel information for domestic and international media.2. Uploading the activities of the Ministry of Hotels and Tourism and sharing information related to tourism on the Website www.myanmartourism.org and media www.facebook.com/moht.mm.3. Technically assisting for video conferencing meeting with line ministries and Regions & State Governments as part of e-Government activities.4. Documentary video recording for meetings with international organizations, ceremonies and activities of the Ministry of Hotels & Tourism related to tourism.5. Applying permission for special interest tours entering Myanmar through the borders such as caravan tours, motor cycle tours, cycling tours, yacht tours, cruise tours, river-cruise tours and charter flight tours to the Union Government and giving approval letter to tour companies and assigning liaison officers for that tours.6. Providing travel news to MRTV and uploading news on ministry website and facebook.
၁။ ပြည်တွင်းပြည်ပ မီဒီယာများမှ မေးမြန်းသည့် ခရီးသွားလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ သတင်းအချက်အလက်များကို ဖြေကြားခြင်း၊emailအီးမေးလ်များဖြင့် ပြန်ကြားခြင်း။၂။ ခရီးသွားလုပ်ငန်းဆိုင်ရာအချက်အလက်များကို ၀န်ကြီးဌာန၏Website www.myanmartourism.org နှင့် media www.facebook.com/moht.mm တို့တွင် လွှင့်တင်ခြင်း။၃။ e-Government ဆောင်ရွက်မှုကဏ္ဍတစ်ရပ်ဖြစ်သည့် ဆက်စပ်ဝန်ကြီးဌာနများ ပြည်နယ်/တိုင်းဒေ သကြီးအစိုးရအဖွဲ့များနှင့် အခါအားလျော်စွာ ပြုလုပ်သည့် Vedio Conferencing စနစ်ဖြင့် အစည်းအဝေးကျင်းပပြုလုပ်ရာတွင် နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာ ဆောင်ရွက်ခြင်း။၄။ ခရီးသွားလုပ်ငန်းနှင့်သက်ဆိ်ုင်သော အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအစည်းအဝေးများ၊ အခမ်းအနားများ၊ ၀န်ကြီး ဌာနလှုပ်ရှားဆောင်ရွက်မှုများကို ရုပ်သံမှတ်တမ်းတင်ခြင်း၊ သတင်းမီဒီယာဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များ ဆောင်ရွက်ခြင်း။၅။ နယ်စပ်ဒေသ၀င်ပေါက်များမှ ၀င်ရောက်လည်ပတ်သောခရီးစဉ်များဖြစ်သည့် မော်တော်ကားယာဉ်တန်း ခရီးစဉ်၊ မော်တော်ဆိုင်ကယ်ယာဉ်တန်းခရီးစဉ်၊ စက်ဘီးယာဉ်တန်းခရီးစဉ်၊ စက်တပ်ရွက်လှေခရီးစဉ် များနှင့် ဧရာဝတီမြစ်ကြောင်းခရီးစဉ်၊ ချင်းတွင်းမြစ်ကြောင်းခရီးစဉ်၊ စင်းလုံးငှားလေယာဉ်ခရီးစဉ်၊ အပျော်စီးသင်္ဘောခရီးစဉ်များအတွက် စိစစ်ခြင်း၊ အစိုးရအဖွဲ့သို့ ခွင့်ပြုမိန့်များကို သက်ဆိုင်ရာဌာန၊ ကုမ္ပဏီများသို့ အကြောင်းကြားခြင်း၊ ခရီးစဉ်တွင် လိုက်ပါမည့် တာဝန်ခံများကို တာဝန်ပေးအပ်ခြင်း။၆။ ခရီးစဉ်သတင်းများကို သတင်းစဉ်နှင့် ရုပ်မြင်သံကြားများသို့ ပေးပို့ခြင်း၊ ၀န်ကြီးဌာန Website နှင့် Facebook တို့တွင် လွှင့်တင်ခြင်း၊ ခရီးစဉ်မှတ်တမ်းများ ထိန်းသိမ်းခြင်း။
Myanmar Hotelier Association http://www.myanmarhotelier.org Myanmar Tourism Federation http://www.myanmar.travel/	You are here: Home // Duties and Responsibilities of ASEAN & Regional Cooperation Department